कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily] - 23 May, 2022
प्रदेश Page 4
अचेत अवस्थामा किशोरी फेला
अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिला
बालेन आवागमनको चित्तबुझ्दो व्याख्या
निर्वाचन आयोगलाई सुझाव
संसद् सुचारु स्वागतयोग्य
बलात्कर सम्बन्धी कानुनी अडचन हटाऊ
युक्रेनले डोन्बासमा युद्धविराम नगर्ने
‘सरकार फेरिए पनि विकासका लागि आर्थिक एजेन्डामा एकत्व’
'निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अनुमति दिनुपर्छ’
सिद्धार्थ बैंकलाई बेस्ट अपरेसन्स अवार्ड
पुँजी बजारको सुधारमा सेबोनको १२ बुँदे सुझाव
उद्योग दर्ता बढ्यो
खेलकुद Page 13
नेपाल–अमेरिकाको क्रिकेट कूटनीति
रोहित पर्सिजाबाट पर्सिक कडिरीमा
पूर्णको टोलीलाई प्रो एम
आर्यन र शुभश्रीलाई उपाधि
- कान्तिपुर टिम
(काठमाडौं) - इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाएको छ भने सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारी पनि शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार ढिलो गरी आउने भएकाले सरकारी सेवा झन् बिग्रिएपछि सुरु भएको दोस्रो सातामा नै पुनरावलोकनका लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।
(काठमाडौं) - भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धनमा मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर
१० रुपैयाँ बढाइएको छ । अब पेट्रोलको
मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पर्ने भएको
छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय
रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । इन्धनमा यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको
मूल्य अचाक्ली बढेको जनाउँदै नेपाल
आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो । ‘मूल्य बढेकै कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । आईओसीबाट इन्धन खरिद गरेबापत मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड मात्रै भुक्तानी गरेका छौं, यही अवस्था रहे आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने देखियो,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कार कार्कीले भने, ‘संस्था बचाउन बाध्य भएर मूल्य समायोजन गरेका छौं ।’
- प्रदीप मेन्याङ्बो,डीआर पन्त,मोहन बुडाऐर
(सुनसरी/धनगढी) - पूर्व र सुदूरका दुई उपमहानगरले यसपटक सामाजिक अभियानको अगुवाइ गरेर जनप्रतिनिधिको काम गराइमा प्रश्न गर्दै आएकालाई नगरप्रमुख निर्वाचित गरेको छ । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका हर्कराज साम्पाङ राई धरानमा र गोपाल हमाल धनगढीमा दलहरूका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजयी भएका हुन् ।
दुवैको जितले राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधिको परम्परागत कार्यशैलीमा मतदाता सुधार चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हमाल २०७४ को निर्वाचनमा आफूलाई २७ सय ९७ मतान्तरले पछि पार्नेलाई नै यसपालि १२ हजार ४८ मतको अन्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । धरान नगरवासीका विभिन्न मुद्दामा अगुवाइ गर्दै आएर निर्वाचनमा होमिएका साम्पाङ सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वले थलिएको सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीमा हमालले संघको अध्यक्ष भएकै बेला सुदूरपश्चिम महोत्सवको सुरुवात गरे । महोत्सवमा उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएर २१ किलोको माला र सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे माग राख्ने प्रचलनको सुरुवात गरे । सुदूरपश्चिमलाई हवाई यातायातबाट नजोडेको अवस्थामा उनले धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे निर्माणमा राज्यलाई दबाब दिन ‘सुदूरपश्चिमवासीको एक पैसा’ अभियान पनि चलाए । यसबाट करिब ५० लाख सहयोग उठेपछि बाँकी लगानी थपेर सरकार विमानस्थल कालोपत्रे बनाउन बाध्य भयो । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले ‘आफ्नो सहर आफैं बनाऔं’ भन्दै स्वतन्त्रबाट नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला उनी एमाले र माओवादीका उम्मेदवारभन्दा बढी मत ल्याएर वडका निकटतम् प्रतिष्पर्धी भएका थिए । लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक बनेका उनले गत चैतमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए । उनले यहाँ गरिब र विपन्न परिवारका लागि कपडा बैंक पनि खोले । यो विपन्न मतदाताका लागि मन छुने काम बन्यो । धनगढीमा शववाहनको समस्या थियो । हमालले आफ्नै लगानीमा दुई शववाहन निःशुल्क सञ्चालन थाले । हमाल २०२० जेठ १६ मा कैलालीको टीकापुरमा जन्मेका हुन् । उनका पिता वनका कर्मचारी थिए । धनगढीमा टिनको बाकस र दराज बनाउने कारखाना खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हमालका चार दाजुभाइको कम्पनी हो दिनेश ग्रुप ।
(पोखरा) - दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पोखरा महानगर–६ बैदामकी शोभा जलारीको मुहारमा बेग्लै चमक छ । निर्वाचित भएको तेस्रो दिन फेवाताल किनारमा डुंगा चढ्ने पर्यटकको पर्खाइमा बसिरहेकी उनले बाल्यकालदेखि वडा सदस्यसम्मको यात्रा एकै सासमा सम्झिइन् । समाजसेवामा रुचि राख्ने उनले ६ वर्षअघि कांग्रेसको सदस्यता लिएकी थिइन् । गएको अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिइन् । यसपल्टको चुनावमा उनलाई पार्टीले वडा सदस्यको उम्मेदवार बनायो । वडाध्यक्ष र दुई सदस्य एमालेले जित्दा उनी र महिला सदस्य पवित्रा थापा कांग्रेसबाट चुनिए । फेवातालमा साहुको डुंगा खियाएर गर्जो टारिरहेकी उनी कास्कीमा जलारी समुदायबाट पहिलो वडासदस्य बनेकी हुन् । माछा मारेर जीविका चलाउने पुर्ख्यौंली पेसालाई शोभाले बाल्यकालदेखि अँगालिन् ।
दुई भाइ र एक बहिनीकी उनी जेठी दिदी हुन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । माछा मारेर आएको पैसाले घरपरिवार धान्न, छोराछोरीलाई पढाइलेखाइ गराउन बाबुआमालाई दुःख नै थियो । आफू ६ कक्षा पढ्दादेखि नै बुबाको सहयोगी भएर
माछा मार्न हिँडेको उनलाई सम्झना छ । डुंगा खियाउन, जाल थाप्न उनले त्यतिबेलैदेखि सिकिन् ।
सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेदका घटनासँग उनी साक्षात्कार भएकी छैनन् । गैरदलितको घरमै प्रवेश गर्न भने उनी अझै समस्या देख्छिन् । उनले पहिलोपल्ट १० कक्षा पढ्दा दलित हुँदाको पीडा महसुस गरेकी थिइन् । गैरदलित साथीको बिहेको अघिल्लो दिन उनी ४–५ जना अरू साथीसँग बिहेघरमा गइन् । साथीले चलाएको देखेर उनले पनि पकाइरहेको तरकारी चलाइदिइन् । बिहे घरकाले उनलाई हेलाहोचो गरे । उनको मन भरिएर आयो । रुँदै घर फर्किइन् । त्यसयता भने उनले त्यतिसाह्रो विभेद भोग्नु नपरेको सुनाइन् । ‘लेकसाइड शिक्षित ठाउँ हो, विदेशी रहनसहनले
पनि छोएको छ,’ उनले भनिन्,
‘राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि मैले विभेद भोग्नुपरेको छैन । घरभित्रै पस्नु अझै पनि चुनौतीको कुरा छ ।’
(काठमाडौं) - स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट ४९ प्रतिशतसम्म युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अयोगका अनुसार आइतबार साँझसम्म ७ सय १४ पालिकामा ३३ हजार ८ सय ५८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
(काठमाडौं) - अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएकी छन् । नेपाल–अमेरिकाको ७५ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आएकी उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेर द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिइन् ।
तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजकसमेत रहेकी जियाले गृहमन्त्री खाँणलाई गृह मन्त्रालय पुगेर भेटवार्ता गरिन् । उक्त अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा प्राप्त अमेरिकी सहयोगको प्रशंसा गरे । गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईका अनुसार भेटवार्तामा खाँणले नेपाल आफ्नो छिमेकी देश भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उपमन्त्री जियालाई जानकारी दिएका थिए । उक्त भेटवार्तापछि जियाले
ट्वीटरमा गृहमन्त्रीसँग नेपालमा मानवअधिकार, मौलिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र संरक्षणका विषयमा फलदायी छलफल भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
उपमन्त्री जियाले परराष्ट्रमन्त्री
खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरिन् । उक्त अवसरमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मञ्चमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जियाले खड्कासँग द्विपक्षीय सम्बन्धको सुदृढीकरण र दुई देशबीच थप ७५ वर्षको मित्रताका बारेमा कुराकानी भएको उल्लेख गरेकी छन् । जियाले शनिबार बौद्धनाथ भ्रमण गर्नुका साथै तिब्बती शरणार्थीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
काठमाडौं (कास)– महिला सांसदले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीमा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग राखेका छन् । आठ वर्षअघिको एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले गरेको बलात्कार र यौन शोषणको घटना सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा आइतबार अनौपचारिक छलफल गर्दै उनीहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अवरोध सिर्जना हुने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । छलफलमा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति राखिन् । उनले सरकारले तत्काल कानुन संशोधन नगरे संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले दोषीमाथि अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । हदम्याद नलगाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने, गैरसरकारी विधेयक ल्याउने वा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजानेलगायतका तीन विकल्पमा महिला सांसदले धारणा राखेका थिए ।
सिरहा (कास)– घरमै सुतिरहेका बाबु र छोराको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ । अर्नमा गाउँपालिका–१ महनौरका ६० वर्षीय चन्देश्वर पाल र उनका १९ वर्षीय छोरा सन्तकुमारको आइतबार बिहान हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । सन्तकुमारको यही जेठ ११ मा विवाह हुने भएकाले गाउँले महिलाहरू नाचगान गरेर शनिबार राति १२ बजे सुतेका थिए । बुबा र छोरा छुट्टाछुट्टै कोठामा सुत्न गएका थिए । उनीहरूलाई सुतिरहेकै ठाउँमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । बुबा एक्लै सुतेको र सन्तकुमारसँग गाउँकै १०–१२ वर्षका बालक सुतेका थिए । उनले नै हत्या भएको थाहा पाएपछि घरका अन्य सदस्य र गाउँलेलाई सुनाएका थिए । सन्तकुमार महनौर बजारमा हार्डवेयर पसलमा काम गर्दै आएका थिए । घटनाबारे अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी डीएसपी सुवास ढकालले बताए ।
(काठमाडौं) - सरकारले उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्चीबाहेक थप वैकल्पिक स्रोतको खोजी सुरु गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका वरिपरि एवं वाग्मती जलाधारलगायत स्रोतको खोजी थालिएको हो ।
- प्रकाश बराल,आश गुरुङ
(बागलुङ/लमजुङ) - बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख र ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्षमा दलित समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । ढोरपाटनमा देवकुमार नेपाली र ताराखोलामा धनबहादुर विक निर्वाचित भएका हुन् ।
दोस्र्रो पटक पनि स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्ष
रोल्पा– सुनीलस्मृति गाउँपालिका–२ मा स्वतन्त्र
उम्मेदवारी दिएका स्थानीय समाजसेवी नेत्र गिरी पुनः वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । उनले माओवादी
केन्द्रका शान्तराम शाहलाई पछि पार्दै जित हासिल
गरेका हुन् । यसअघि पनि उनले स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्ष जितेका थिए ।
ओखलढुंगा (कास)– मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–५ धिमिलेकी एक किशोरी अचेत अवस्थामा फेला परेकी छन् । घरदेखि करिब डेढ किलोमिटर टाढा सडकमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । परिवारका अनुसार १७ वर्षीया ती किशोरी शनिबार साँझ खाना खाएर घरमै सुतेकी थिइन् । बिहानपख ब्युँझिँदा ओछ्यानमा थिइनन् । घरमा नदेखिएपछि परिवारका सदस्य र गाउँलेले बिहान झिसमिसेमै खोजी गरे । घरदेखि केही पर भेटिएकी उनको टाउकोमा गम्भीर चोट थियो । कपडाहरू च्यातिएका थिए ।
प्रहरीको सहायतामा तत्काल उनलाई ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल मिसनमा उपचारका लागि लगियो । उपचारपछि केही होसमा आएकी किशोरीले प्रहरीलाई संकेत दिएको आधारमा एक शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरीका डीएसपी सुकदेव खनालका अनुसार किशोरीमाथि बलात्कार र हत्याको प्रयास गरिएको आशंका गरिए पनि यकिन भइसकेको छैन । किशोरीलाई थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत शिक्षण अस्पताल काठमाडौं पठाइएको छ । बलात्कार भए नभएको विषयमा फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गरी रिपोर्ट उपलब्ध गराउन प्रहरीले शिक्षण अस्पताललाई अनुरोध गरेको छ । पक्राउ परेका व्यक्ति छिमेकी जिल्लाका भए पनि थप अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले पूर्ण जानकारी दिइसकेको छैन । प्रहरीका अनुसार किशोरीको टाउकोमा गह्रुँगो वस्तुले बेस्सरी हिर्काएको देखिन्छ ।
बिर्तामोड (कास)– झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार फूलबती राजवंशी तथा उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार पुजन न्यौपाने कुँवर निर्वाचित भएका हुन् ।
आइतबार राति सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाममा अध्यक्षमा निर्वाचित राजवंशीले एमाले उम्मेदवार विजयकुमार अग्रवाललाई २ हजार ३ सय ५९ मतान्तरले पराजित गरेकी हुन् । राजवंशीले ५ हजार ६ सय ८९ तथा पराजित अग्रवालले ३ हजार ३ सय ३० मत पाएका थिए । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा एमालेकी कुँवरले कांग्रेसका मखना महतोलाई ९ सय ३० मतान्तरले पराजित गरिन् । न्यौपानेले ४ हजार ७ सय ५५ तथा महतोले ३ हजार ७ सय ९५ मत पाएका थिए । जिल्लामा आदिवासी राजवंशी समुदायबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुने फूलबती पहिलो महिला बनेकी छन् । पार्टीको प्रदेश समिति सदस्य राजवंशी ०४५ देखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छिन् । उनको नाम दुवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा राखे पनि पार्टीले उनलाई मनोनयन गरेको थिएन । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गौरीगन्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेकी उनी पार्टीको अन्तर्घातको सिकार बनेकी थिइन् ।
‘भर्नाकै बेला विद्यार्थीको हातहातै पाठ्यपुस्तक’ भने नाराबाटै सजिलै बुझिन्छ— विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउनै सरकारलाई
हम्मे पर्छ । नत्र, शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा स्वचालित चक्रबमोजिमै नयाँ
पाठ्यपुस्तकहरू बजार–विद्यालयमा पुगिसक्नुपर्ने हो, यसका निम्ति नारा नै बनाएर विशेष प्रण गरिरहनु नपर्ने हो । तर बर्सेनि शैक्षिक सत्र बितेका कैयौं महिनासम्म पनि मुलुकका कति भेगका विद्यार्थीले पुस्तक
पाउँदैनन्, कति स्थानमा त परीक्षा आइसक्दा पनि पुस्तक पुगेको हुँदैन । यसपालि पनि नारा यस्तो बनाएर के गर्नु, विद्यालयहरू खुलिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीका हात–हातमा पुग्नु त परै जाओस्, कक्षा पाँच, छ र आठका किताब छापिनै बाँकी छन् ।
विद्यार्थीका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्नु एउटा नियमित अनिवार्य कार्य हो । भैपरी रूपमा कुनै अड्चन आइलागे पनि शैक्षिक पात्रोमा फरक नपर्ने गरी केन्द्रले काम गर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे कुनै न कुनै बहाना र मुद्रकदेखि वितरकसम्मको आ–आफ्नै जुँगाको लडाइँका मारमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य पर्नु हुँदैन । जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि सजाय–पुरस्कारको व्यवस्था नभएकैले यो हदको लापरबाही दोहोरिँदै आएको हो । नेपालको समग्र शासनपद्धतिदेखि नियमित स्वभावजस्तो बनिसकेको ‘बहानाबाजी’ बाट विद्यार्थीको भविष्य बचाउन सरकारले केन्द्रको उचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । र, साझा प्रकाशनदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म आफ्नै छापाखाना भएका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सरकारले अन्य निकायबाट पनि पुस्तक छाप्नेबारे सोच्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बोक्ने निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर भए पनि सरकारले विद्यार्थीका हातमा समयमै पुस्तक पुर्‍याउने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, शैक्षिक सत्रैपिच्छे दोहोरिने यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति यस्तो बेथितिबीच शिक्षा मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बस्नु हुन्न । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन उसले यथोचित पहल थाल्नैपर्छ ।
कृष्ण खनालको ‘स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का’ लेख राम्रो लाग्यो । ‘बालेनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ’ भन्ने कुरा निकै सही छ । पञ्चायतकालको नानीमैया दाहालले पाएको मतसँग तुलनात्मक दृष्टिकोण राख्न खोज्नेहरूका लागि लेखकले चित्तबुझ्दो तवरले यो दुई घटनाको फरकलाई स्पष्टसँग बताएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने, आममानिसको राजनीतिक दलप्रतिको विकर्षणको ग्राफ चुलिइरहेको अवस्थामा बालेनजस्ता शिक्षित युवा राजनीतिमा केही गरौं भनेर आउँदा, मतदाताले उनलाई अवसर दिएका हुन् । उनले पाएको मत युवा साहसका लागि धाप हो, स्याबासी हो । काठामाडौं महानगरको मेयरको नतिजा आएको छैन, तर बालेनले जित्ने लगभग निश्चित नै छ । दलबाहिरबाट यसरी चुनाव जित्नु सानोतिनो घटना होइन, यसले लेखकले भनेझैं दलहरूलाई सुध्रन झक्झक्याएको छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं
उम्मेदवारहरूको बराबर मत आएमा गोला प्रथाद्वारा विजेता घोषणा गर्ने ऐन संशोधन गर्न सरकारसामु निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सहमतिका आधारमा आधा–आधा कार्यकाल चलाउने नियम बनाउनुपर्छ । बराबर मतको अर्थ जनताले दुवैलाई बराबर जनमत दिएको ठहर्छ । कसले पहिले कसले पछि चलाउने भन्नेमा चाहिँ सहमति नभए गोलाप्रथा गर्न सकिन्छ । यसपालि धेरै वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी खाली देखियो । उपलब्ध भएसम्म दलित र हुँदै नभए अल्पसंख्यक, आदिवासी, वडागत रूपमा पछि परेका र अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई स्थान दिने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । दलित समुदायको बसोबास नै नरहेका वडाहरू पनि प्रशस्तै छन् नेपालमा । त्यस्तै भोट सदर वा बदरको निर्णय गर्ने अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाहेक निर्वाचन अधिकृतहरूलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरियोस् । यसो गर्दा वडागत रूपमै पनि मतगणना गर्न सम्भव हुन्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको मतगणना गर्न हप्तौं लाग्दैन र छिटो नतिजा आउँछ । यो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला प्रतिनिधित्व यथोचित हुन सकेन । त्यसैले गठबन्धन हुँदासमेत प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य रूपमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने नियम कायम गर्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम रिजाल, विदुर–८, नुवाकोट
अन्ततः ९ महिनाको निरन्तर संसद् अवरुद्धपछि, बल्ल सुचारु हुन पुगेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । संसद् सुचारु हुनु जनआवाज उच्च तहमा सुनुवाइ हुनु हो । संसद् सुचारु गर्न दिएर एमालेले जिम्मेवार राजनीतितर्फको यात्रा थालेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरू मात्र होइन आम जनता पनि संसद् अवरुद्धको पक्षमा थिएनन् । लामो अवरुद्धले आम जनतामा राजनीतिप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा जन्मन पुगेको थियो । संसद् नचाहिनेहरूलाई चुनाव नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि घनीभूत भएको थियो । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ एमालेले दिन सकिरहेको थिएन । एमालेले एउटै विषयलाई अदालतमा पनि उठाइरहेको र संसद्मा पनि दोहोर्‍याइरहेको थियो । जसलाई आम जनताले मन पराइरहेका थिएनन् । सायद त्यसैको केही प्रतिकूल असर यसपालिको स्थानीय चुनावमा पर्न गयो । पहिलो पार्टीबाट दोस्रोमा झर्न पुग्यो । आम जनताको मनोभाव बुझ्न नसक्नु एमालेको कमजोरी रह्यो । चुनावको नतिजा आएपछि बल्ल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घैंटौमा घाम लाग्न पुग्यो र संसद् खोल्ने निणर्यमा पुगे । चुनावको अघिसम्म परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारलाई जनसमर्थन छैन भनेर अध्यक्ष ओलीले भनिरहेका थिए । तर नतिजा ठीक उल्टो निस्क्यो । आम जनताले परमादेशको सरकारलाई समर्थन गर्दै लालमोहर लगाइदिएपछि ओली झस्कन पुगे र अहिले आएर संसद् खोल्ने निणर्यमा पुगे । एमालेलाई जनताले पहिलोबाट दोस्रोमा नझारेको भए अहिले पनि संसद् सुचारु हुन सक्दैन थियो । ठूलो पार्टीको धङधङी नहटेसम्म ओली टसको मस हुँदैन थिए । संसद् अवरुद्ध गरिरहने तर भत्ता भने खाइरहनेजस्ता अराजनीतिक गतिविधिप्रति जनता रुष्ट थिए ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, कामनपा–७
सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले गरेको आठ वर्षअघिको यौन शोषण, सार्वजनिक हुँदा पनि विद्यमान कानुनले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको छ । बलात्कार भएको एक वर्षभित्र उजुरी नगरे फाइल नै दर्ता नगर्न कानुन छ रे ! सुन्दा अचम्म लाग्यो । ‘नेपालको कानुन, दैव जानून्’ भनेको ठीकै रहेछ । यदि दर्ता गर्न नमिल्ने कानुन छ भने, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो । जसरी हुन्छ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । यो त साह्रै अन्याय भयो । बलात्कार सम्बन्धी कानुनको उजुरी हदम्याद अब संशोधन गर्नुपर्छ ।
कडा कानुनी कारबाही हुने स्थिति बने मात्र बलात्कारीको मनोबल घट्छ । होइन भने बलात्कार रोकिँदैनन् । बलात्कारीहरू कतिपय कानुनको कामजोरीको फाइदा उठाउँदै उम्कने गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । सडकमा आवाज उठेपछि सरकारले खोजबिन–अनुसन्धान गरेजस्तो गर्छ तर पीडकलाई कडा कारबाही हुँदैन । त्यसकारण कानुनलाई बलियो बनाउन सबैतिरबाट दबाबको खाँचो छ । कानुन
बलियो नभएका कारण अपराधीको मनोबल बढ्ने गर्छ । बलात्कारपछि हत्याका घटना धेरै छन् । तर, निकै कम संख्यामा मात्र अपराधी पत्ता लागेको छ, सजाय भएको छ । घटनाको अनुसन्धान गरे पनि अपराधीसम्म कानुन पुग्न सकेको छैन । कतिपय घटनालाई त, प्रहरीले मिलापत्रको नाउँमा पीडकलाई छाडेका पनि छन् । केही वर्षअघि नेपालगन्जकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, सो घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडकले सजाय पाउनुपर्छ भनेर नागरिक सडकमा आउँदा पनि, आन्दोलन देशव्यापी बन्दा पनि आजसम्म अपराधी खुल्लमखुला हिँडिरहेका छन् । समाचार नबनेका घटनाहरू पनि कति छन् कति । त्यसैले बलात्कारीलाई सजाय दिलाउन कानुनलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
श्रीलंका दक्षिण एसियाली मुलुक भएरै नेपालमा त्यहाँको संकटबारे ठूलो चर्चा भएको हो तर गत दुई वर्षमा अर्जेन्टिना, बेलिज, इक्वाडोर, सुरिनाम, लेबनान र जाम्बिया आवश्यक वैदेशिक मुद्रा नभएर आफूलाई टाट (डिफल्ट) घोषणा गर्ने देशमा पर्छन् । ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने स्कोप ग्रुपका अनुसार बढ्दो बजारमूल्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलता (रेजिलिएन्स) श्रीलंकाभन्दा धेरै फरक छैन । जस्तो कि, सबल अर्थतन्त्रको १० अंकमा श्रीलंकाको अंक ३.३ छ भने नेपालको ५.३ छ । भन्नुको अर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभावका हिसाबले दीर्घकालीन रूपले नेपाल र श्रीलंकाका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्Ù जस्तो कि— खाद्यान्न र इन्धनमा परनिर्भरता, विकास र पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋण र सहायता लिनुपर्ने बाध्यता, न्यून मूल्य भएका चिया आदि वस्तुको निर्यात, वैदेशिक रोजगारीमा भर परेको अर्थतन्त्र आदि । अहिले नै निर्मम निर्णय गरेर अर्थतन्त्रका धेरै कुरामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकिए र नेपालको शोधनान्तर घाटा आगामी महिना बढ्ने क्रम जारी नै रहे कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटामा जाने सम्भावना जिउँदै छ ।
समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या चार प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत नीतिगत समस्या जस्तो कि— माथि उल्लेख गरिएझैं बजेटका प्राथमिकता, कार्यान्वयन आदिका समस्या । दोस्रो, अर्थनीतिको नेतृत्वमा अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने दीक्षा र दृष्टि (एक्स्पोजर) को कमी । तेस्रो, गत तीन वर्षमा कोरोना महामारीले ल्याएको नयाँ खालको चुनौती जसलाई अहिले ‘कोरोनोमिक्स’ शब्दले पनि सम्बोधन गरिन्छ । चौथो, युक्रेनमा रूसको आक्रमण र चीनले कोभिड–१९ विरुद्ध लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिका कारण विश्वको अर्थ–राजनीतिमा परेको प्रभाव ।
नोट ः यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।
शताब्दिऔंदेखि बलात्कारविरुद्धको आवाजले विशेष किसिमको न्याय खोजिरहेको छ । न्याय पद्धतिले विशेष प्रमाण माग्दै, बलात्कार र यौन हिंसा झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई अन्यायमै धकेलिरहेको छ । त्यो पनि शताब्दिऔंदेखि, अनवरत । अन्यायपूर्ण थिति न सजिलै सच्चिन्छ न सच्याउने अवसर सधैं आउँछ । अझ यस्तो थिति भत्काउँदै नयाँ न्यायिक थिति बसाल्ने कार्य अपेक्षाकृत गाह्रो छ । न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सार्थक परिवर्तन असम्भवजस्तो देखिए रूपान्तरण अपरिहार्य छ । अहिले सडकमा पोखिएको आक्रोशले रूपान्तरणका सम्भावनालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ । केवल आक्रोशलाई सशक्त आन्दोलनमा बदल्ने सोच, प्रतिबद्धता र न्यायका आयामहरूबारे घच्चीको विमर्शको खाँचो छ ।
आठ वर्षअघि केही व्यक्तिले मात्र चिनेकी एक बलात्कारपीडित युवतीलाई आज एकाएक धेरैले चिन्छन् । यस्तो अवस्था उनका लागि अनपेक्षित हो । उनी मोडल भएर चिनिन चाहन्थिन् । नियतिले उनलाई बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्ध न्याय खोजिरहेको व्यक्तिका रूपमा चिनायो । उनलाई आफूले भोगिरहेको नर्कबाट निस्कने क्षण जुराउन आठ वर्ष लाग्यो । अहिले उनको जीवनमा आएको क्षणले उनलाई धेरैले चिन्नुपर्ने भयो । उनको चिनारी अन्यायमा परेकी युवतीकै रूपमा सही, तर मूलतः न्यायको संघर्षलाई नयाँ मोड दिने प्रस्थानविन्दु हो । अपेक्षित साथ–सहयोग जुट्यो र न्याय हासिल गर्ने धैर्य उनमा बलशाली रहिरहे अवश्य उनको जीवनमा अर्थपूर्ण अध्याय थपिनेछ ।
गत बुधबार अधिकांशको ध्यान स्थानीय चुनावको नतिजातर्फ खिचिएका बेला एकाएक ती युवतीको विक्षिप्त अवस्थाले धेरैको ध्यान तान्यो । उनले टिकटक र इन्स्टाग्राममार्फत आफूले झेलेको बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका हृदयविदारक परिघटना खुलासा गरिन् । बलात्कार, ब्ल्याकमेल र यौन हिंसाका भोगाइ दुनियाँसामु राखेसँगै युवामा आक्रोश जाग्यो । तत्कालै जनआक्रोशले सडक तात्यो । बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्धको आन्दोलन जुरमुराउन थाल्यो । सदनबाट समेत उनीमाथि भएको अन्याय छानबिन गर्ने निर्देशन आयो । सरकार र राज्यका संयन्त्रहरू अब एक वा अर्को बहानामा उम्किहाल्ने स्थिति छैन ।
अन्याय भोगेको प्रत्येक व्यक्तिको माग प्रस्ट भएजस्तै उनको माग सीधा छ । उनलाई न्याय चाहियो । उनले तत्कालै न्याय पाउनुपर्ने समर्थनमा उठेको जनलहरको माग उत्तिकै प्रस्ट छ । बलात्कार भोगेको व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्‍यो । बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा उजुरी गर्ने हदम्याद खारेज हुनुपर्‍यो । व्यक्तिको निजत्वमै प्रहार गर्ने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्यादको प्रावधान राख्नै भएन । छिटोछरितो अदालती प्रक्रियामार्फत न्याय सम्पादन हुनुपर्‍यो ।
हेर्दा सरल लाग्ने यी मागहरू पुरुषवादी संरचनाले मलजल गरेको ऐतिहासिक लैंगिक विभेद र ऐतिहासिक दण्डहीनताको भासमा थिचिएका छन् । सजिलै पूरा हुँदैनन् । त्यसैले हदम्यादको हदभन्दा पर धेरै पक्षबारे सडकको आक्रोश चनाखो हुनुपर्छ । अन्यथा सडक सेलाउँदै जान्छ र अन्यायको विद्यमान थिति बलियोसँग झाँगिन थाल्छ ।
हदम्यादको खारेजी न्यूनतम सर्त हो । हदम्याद खारेज हुँदैमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसाले गर्दा कोही पीडित नहुने न्यायिक थिति बनिहाल्दैन । त्यसका लागि कानुनी प्रावधानमा मात्र होइन न्यायिक क्षेत्रमै व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । कानुनमा अपेक्षित सुधार भइहाले पनि कानुन कार्यान्वयन नहुने र अन्याय भोगेकाले न्याय अनुभूति गर्न नपाउने सांस्कृतिक र संस्थागत व्यवधानहरू प्रशस्तै छन् ।
सबैभन्दा पहिला प्रहरीले काम गर्ने तौरतरिकामै सार्थक फेरबदल चाहिएको छ । हिजो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुँदा हदम्यादको कारण छानबिन नभएको होइन । शक्ति र सत्तामा जसको पहुँच थियो तिनले उपलब्ध प्रमाणहरू नष्ट गर्न प्रहरीलाई नै तत्काल परिचालन गरे । छानबिनको प्रक्रिया कमजोर र फितलो बनाए । प्रहरीले पनि त्यसै गर्‍यो । पीडितविरुद्धमा काम गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिन प्रमाण मेटाए । प्रहरीको कुकर्म छर्लंग हुँदासमेत सम्पूर्ण प्रहरी संयन्त्र सत्ताधारीको बचाउमा सक्रिय रह्यो । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने प्रक्रियाविरुद्ध प्रहरी–प्रशासन उपयोगी बन्यो । निर्मलाका परिवारलाई न्याय दिलाउने संघर्षले सडक लामै समय तात्यो तर प्रहरी संयन्त्रमा सुधार ल्याउनेतर्फ आन्दोलन खासै लक्षित हुन सकेन । निर्मलाको परिवारले त न्याय पाएन–पाएन, त्यसपछि भएका कैयौं बलात्कारका घटनामा समेत प्रहरी उस्तै गैरजिम्मेवार देखियो ।
बलात्कारविरुद्धको संघर्षमा हिजोका अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रहरीले गर्ने छानबिनमाथि निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ । सर्वविदितै छ, प्रहरी हाम्रो होइन सत्ताधारीको साथी हो । हो, अहिलेको घटनामा प्रहरीले काम गर्ने स्थितिमा तात्त्विक फरक छ । विगत आठ वर्षमा कतिपय प्रमाण एक वा अर्को किसिमले लोप भएका छन् । प्रहरीले अभियुक्तको बचाउमा वा सत्ताधारीको इसारामा बाँकी प्रमाण नष्ट गरिनहाल्ला । बलात्कार गरिएपछि निर्मलाको हत्या गरियो, त्यसैले केही भन्ने मौका उनलाई जुरेन । प्रहरीले प्रमाण मेटाउँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको पहिचान नै हुन सकेन । अहिले आरोपी मनोज पाण्डेको नाम किटानी भएको छ । छानबिनका लागि उनलाई गिरफ्तार
गरिएको छ । सोधखोजका लागि समातिनु आरोपीले सजाय पाउनु होइन, छानबिन सजिलो होस् र त्यो अवधिमा मूल अभियुक्त फरार नहोस् भन्ने हो । तर न्याय खोजिरहेकाहरूको चासो केही समयका लागि अभियुक्त समातियोस् भन्ने मात्र होइन, शक्तिस्वार्थबाट छानबिन प्रभावित नहोस् र अन्यायको थिति रोकियोस् भन्ने हो ।
प्रहरीले बलियो छानबिन गर्न नसके संसद्मा उठेको आवाज पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हदम्यादको खारेजीले मात्र पुग्दैन । लैंगिक संवेदनशीलता र समानताका पक्षमा सरकारले देखाउने सहानुभूति अपुग हुन्छ । सरकार र सदनका बोलीहरू पनि फगत आश्वासन देखिन्छन् । तर प्रहरीको विद्यमान संयन्त्रले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गर्छ भनेर विश्वस्त हुने आधारहरू खासै छैनन् ।
बलात्कारविरुद्धको संघर्षमा न्याय सुनिश्चित गर्न प्रहरीमा आमूल सुधार अपरिहार्य छ । सर्वविदित छ, प्रहरी–प्रशासन राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारमा व्याप्त शासन चलाउन प्रहरी संयन्त्र परिचालित हुने गर्छ । प्रहरी निकायभित्र असंवेदनशील लैंगिक अभ्यास गहिरो छ । नाबालिग र लैंगिक विभेदविरुद्ध सार्थक काम गर्ने तौरतरिकामा फेरबदल ल्याउन महिला प्रहरीको संख्या बढाउने कार्य प्राथमिकतामा छैन । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा छानबिन गर्न विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रहरी नेतृत्वमा देखिँदैन । सदनको निर्देशनलगत्तै, ती युवतीले खुलासा गरेको घटनामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ । आरोपीलाई समेत कठघरामा ल्याएको छ । सडक तातिरहेकाले प्रहरीले राम्रै छानबिन गर्ने आस गर्न सकिन्छ, तर ढुक्क पर्न सकिन्न । यसै पनि प्रहरी सुधारको नाममा प्रहरी–प्रशासनमा जनताको कर र विदेशी सहायताको रकम जुन मात्रामा खर्च भएको छ, त्यसको एकएक हिसाब माग्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसैले सडकमा आक्रोशसँगै सजगताको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ ।
जबसम्म प्रहरी राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, भ्रष्टाचार, असंवेदनशील लैंगिक विभेदको प्रतीक बनिरहन्छ, तबसम्म प्रहरीले बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा उच्च कोटिको छानबिन नगर्न सक्छ । त्यसैले बलात्कारविरुद्धको आन्दोलन प्रहरीमा आमूल सुधारतर्फ समेत लक्षित हुनुपर्छ । अन्यथा प्रहरीको सहयोगमा शक्तिशालीले उन्मुक्ति पाउने, उनीहरूका पक्षमा प्रमाण नष्ट हुने वा छानबिन प्रतिवेदन कमजोर हुने सिलसिला चलिरहनेछ । छानबिन कमजोर हुनासाथ अदालत पुग्नुभन्दा पहिला नै न्याय नपाउने स्थितिलाई प्रहरीले सुनिश्चित गर्छ । मुद्दा बीचमै तुहिने सम्भावना बलियो बन्छ ।
यसै पनि बलात्कारजस्तो अपराधले व्यक्तिको निजत्व र मनोवृत्तिका परिधिहरू भत्काएको हुन्छ । मानव अधिकारको भाषामा, बलात्कारले व्यक्तिको अस्मिता र शारीरिक निष्ठामाथि आक्रमण गर्छ । नारीवादी अभिव्यक्तिमा, यौनिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्छ । पुस्तौंपुस्तादेखि बलात्कारले भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभावमार्फत मानिसको समग्र जीवनलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ । बलात्कार झेलेको व्यक्तिको लैंगिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सन्दर्भमै भयानक फेरबदल आउँछ । बलात्कार एक क्षणिक आपराधिक घटना मात्र होइन । बलात्कार वा यौन हिंसा झेलेका व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसो आफूमाथि भएको अपराधको भारीले थिचिन्छन् । समय गुज्रेपछि तीमध्ये थोरै आफूमाथि भएका अपराधका आयामहरू देख्न थाल्छन् । तीमध्ये पनि थोरैले मात्र अपराधविरुद्ध बोल्छन् । यस्तो अवस्थामा पुग्न ती युवतीलाई जस्तै वर्षौं लाग्न सक्छ । बोल्ने संयोग जुटाउन पनि अनेकौं अन्याय र मानसिक तनावबाट गुज्रिनुपर्छ । त्यसैले बलात्कार झेलेका व्यक्तिको न्यायको खोज खुलासा भएपछि संघर्षको त्यस्तो आह्वानलाई तुहिन नदिने सार्वजनिक दायित्व बग्रेल्ती छन् । संरचनागत व्यवधानहरू धेरै छन् ।
सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो समग्र न्यायिक प्रक्रिया हो । आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी छानबिन, सामाजिक अपहेलना र न्यायिक केरकार विक्षिप्त अवस्थामा बाँचेका धेरै व्यक्तिले झेल्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा ती झेल्ने किसिमका पनि हुँदैनन् । यी प्रक्रियाहरू अन्याय झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने हेतुले बनेका छैनन् । न्याय पाउने प्रक्रियामा अन्याय भएको प्रमाणित गर्ने बोझ अन्याय भोगेका व्यक्तिहरूमै नै थोपरिएको छ । त्यसैले समग्र न्यायिक प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउने किसिमले हस्तक्षेप गरिनुपर्छ । अन्यथा बलात्कार र यौन हिंसा भोगेका व्यक्तिले बोल्ने हिम्मत जुटाइसकेपछि उनीहरू बीचमै हतोत्साहित हुने र त्यस्तो मुद्दा बीचमै तुहिने सिलसिला चलिरहन्छ । यो चक्र भत्काउनैपर्छ ।
अहिले नयाँ पुस्ताका नारीवादीहरूले ‘दिज्जु नारीवाद’ सत्ताधारीजस्तै भयो भनिरहँदा एउटा कुरा बिर्सन मिल्दैन । हिजोका प्रयासहरूले केही क्षेत्रमा विशिष्ट कानुनी सुधार ल्याए भनिन्छ । तत्कालीन समयमा ती सुधारहरू ठूलै उपलब्धि मानिए । ती कानुनी सुधारका पक्षमा प्रशंसाका पुष्पगुच्छा बर्सिए । तर कतिपय कानुनी उपलब्धिहरूविरुद्ध सत्ताधारीहरू अर्कै किसिमले संगठित भइरहँदा धेरै नारीवादी आफैं सत्ताधारी भए । अधिकांश अवस्थामा प्रत्येक कानुनी उपलब्धि व्यवहारमा साकार हुन सकेका छैनन् । पुरुषप्रधान सांस्कृतिक चिन्तनबाट आउने अनेकौं व्यवधान बाधक बनेका छन् । यी व्यवधानहरू सबैभन्दा बढी गृह प्रशासन, कानुन प्रशासन र निजामतीका संयन्त्रबाट आउने गर्छन् । अहिलेका नारीवादीहरूले कानुनका निर्माता र कार्यान्वयनकर्तालाई गुहारिरहँदा सबैभन्दा सजग यस कुरामा हुन जरुरी छ— आन्दोलनभित्रका आशंकाहरूसँग खेलेर सरकारका संस्था र निजामतीका संयन्त्रले कानुनी सुधार गर्ने नाममा ‘संगी’ नारीवादीहरूलाई सत्ताधारी बनाउनेछन् । त्यसैले संगठित शक्तिको सञ्चय गर्न मूल शत्रुप्रति लक्षित हुन जरुरी छ ।
न्यायको प्रत्याभूति केवल राज्यको दायित्व हुन सक्दैन । अन्यायमा परेका सबैले यथाशीघ्र कानुनको ढोका ढकढक्याएर न्याय पाउन सक्नु नै ‘आदर्श समाज’ ठहर्दैन । यस्तो सोच न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अठोटका लागि धेरै दृष्टिले प्रत्युत्पादक छ । निकै साँघुरो पनि छ । सकेसम्म अपराध नै नहुने, प्रहरी र कोर्ट–कचहरी जानै नपर्ने अवस्था रच्ने सांस्कृतिक अभियानमा मात्र बलात्कार र यौन हिंसा नहुने कल्पना गर्न सकिन्छ ।
अहिलेका मागहरू प्रस्ट छन् तर सांस्कृतिक रूपान्तरण ल्याउन पर्याप्त नहुन सक्छन् । कम्तीमा लैंगिक वा अरू बहानामा व्यक्तिहरू भिन्न भएकै कारण अपराध नहुने सुनिश्चितता होस् । अपराध भइहालेको खण्डमा निर्धक्कसँग प्रहरीलाई छानबिनका लागि गुहार्न सकियोस् । विगतमा बलात्कार र यौन हिंसाका घटना भोगेका धेरै व्यक्तिले विक्षिप्त मनोदशाकै अवस्थामा समेत उजुरी दिन सक्ने सार्वजनिक संस्था निर्माण गर्न सकियोस् । छानबिन प्रक्रिया स्वतः अघि बढोस् । बलात्कार मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध भएकाले छिटोछरितो न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामार्फत न्याय प्रत्याभूत गर्ने थिति बसोस् ।
यी मागहरू दण्डहीनता मौलाएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि सामान्य हैनन् । यहाँ सत्ताधारीको इसारामा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीसँगै शक्तिशाली अभियुक्तका पक्षमा फैसला गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको संख्या धेरै छ । न्यायिक क्षेत्रमा शक्तिको चरम दुरुपयोग छ । विशिष्ट किसिमको सांस्कृतिक र राजनीतिक स्वार्थ सम्बन्धमा फसेको न्यायिक क्षेत्र आफैं आन्दोलनरत छ । आन्दोलनले यस क्षेत्रमा गर्न सक्ने व्यापक सुधारतर्फ समेत ध्यान दिँदै सार्थक हस्तक्षेपका अवसरहरू नपहिल्याए न्याय दुलर्भ छ । दण्डहीनता मौलाएको मुलुकमा यदि कुनै अभियुक्तसँग पैसा, पद र शक्ति छ भने उसले सजाय नपाउने सम्भावना उत्तिकै छ । कुनै अभियुक्तले सजाय पाइहाल्यो भने, न्यायिक सम्पादनका आधारभूत पक्षमा सुधार नहुने सम्भावन ज्युँका त्युँ छ । अहिलेको आन्दोलनले कम्तीमा लैंगिक विभेदका घटनाहरूमा मात्र सही, न्यायिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन खोज्नु अपरिहार्य छ ।
आशा गरौं, ती युवतीलाई न्याय पाएको अनुभूति छिट्टै हुनेछ । यस्तो हुन सके, उनको न्यायिक संघर्षले मैना सुनुवार, सीता राई, निर्मला पन्त, उर्मिला थारू र अन्य धेरै गुमनाम व्यक्तिको भन्दा फरक मानक
स्थापित गर्नेछ । अनि हालको संघर्ष नेपालको लैंगिक समानता र न्यायको संघर्षमा ऐतिहासिक कोसेढुंगा साबित हुनेछ, जसलाई आगामी पुस्ताले गर्वसाथ स्मरण गर्नेछ । के व्यापक सुधारतर्फ नलागी यस्तो उपलब्धि हासिल होला ?
अमेरिकी समाजशास्त्री सिराइट मिल्सको विश्वचर्चित पुस्तक ‘द सोसियलजिकल इम्याजिनेसन’ का केही सारमध्ये एउटा छ— ‘व्यक्तिको जीवन हेरे कुनै पनि समाजका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।’ एक युवतीले आफूले सोह्र वर्षको उमेरमा बलात्कारमा परेदेखि भोगेको आठ वर्ष लामो संघर्षको पीडा सामाजिक सञ्जालमा सुनाइरहँदा हामी धेरैले उनको पूरै अभिव्यक्ति एकै पटक हेर्न सकेनौं । किस्ताकिस्तामा हेरिएको भिडियोले कसरी समाजले मानिसलाई किस्ताकिस्तामा मारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई छर्लंग पारेको छ । यो लेख तिनै युवतीले
अभिव्यक्त गरेको कथामा देखिएको नेपाली
समाजको अनुहार र उठिरहेका बहसहरूमाथिको छोटो समीक्षा हो ।
ती पीडित युवतीले उक्त घटनाका सन्दर्भमा गुहार मागेकी एक कलाकारलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिरहिएको छ । जबकि उनी न बलात्कारी हुन् न त बलात्कारीको मतियार नै । उक्त अभिव्यक्तिमा अरू कैयौं पुरुषका कुरा छन्— आरोपित मनोज पाण्डे, उनले यौन सम्बन्ध राख्न लगाएका उनका साथीहरू, युवतीका तथाकथित प्रेमी जसलाई उनले विश्वास गरेर आफ्ना पीडा सुनाउँछिन् तर उसैले ‘म पनि बलात्कार गर्छु’ भन्दै जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्ने अर्थात् बलात्कार गर्ने गर्‍यो । युवतीका यी अभिव्यक्तिहरूका आधारमा भन्दा, ती पुरुषहरू अपराधी हुन् । तर, समाज ती पुरुषहरूका विषयमा भन्दा फोनमा राम्ररी रेस्पोन्स नगरेकी अर्की युवतीमाथि खनिएको छ ।
समाजमा व्यक्ति कत्तिको जिम्मेवार हुने वा नहुने भन्ने सवालमा नैतिकता जोडिएको हुन्छ । आफ्नो
पद वा काम जोगाउने रहर वा बाध्यताले धेरै मानिसले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीबाहेकमा चासो नराख्न पनि सक्छन् । यसै पनि कुनै पनि मानिस सबैका लागि सहयोग गरिदिन र बोलिदिनका लागि मानसिक, शारीरिक वा आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन पनि सक्छ । आफूलाई पर्दा सहयोग नगरिदिने मानिसलाई गाली गर्ने वा उसप्रति गुनासो गर्ने हक सबैलाई हुन्छ ।
ती युवतीलाई बलात्कार गरेको ‘मर्द’ ले उनलाई नाङ्गो पारेर फोटो र भिडियो खिच्छ अनि ‘नांगो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक भए तिम्रो इज्ज्त जान्छ, मैले भनेको नमाने तिम्रो नाङ्गो फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भनेर धम्की दिएर बलात्कार मात्रै गर्दैन, अरूलाई पनि बलात्कार गर्न उक्साउँछ । समाजमा आफ्नो इज्जत जाने डरले उनी चुपचाप छ–छ महिनासम्म अपराधीले भनेको मान्न बाध्य हुन्छिन् । जबजब उनी हिम्मत गरेर प्रहरीमा जान चाहन्छिन्, तबतब उनको तथाकथित प्रेमी भन्छ, ‘प्रहरीमा भनेर के हुन्छ ? बरु तिम्रै इज्जत जान्छ ।’ इज्जतको यो त्रास यौन हिंसामा परेका अधिकांश किशोरी र महिलालाई देखाइन्छ । तर, त्यस्तो इज्जतले हिंसापीडितको पीडामा
मल्हम लगाएको छ त ? उत्तर त छैन आउँछ । बलात्कारीको इज्जत नजाने, बलात्कारपीडितको चाहिँ जाने भनेर छोरीहरूलाई तर्साउन बन्द गर्ने बेला भइसकेन ?
किभ (एजेन्सी)– युक्रेनले डोन्बास क्षेत्रमा युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेको छ । रुसले पछिल्ला दिनमा पूर्वी क्षेत्र डोन्बासमा आक्रमण तीव्र पारिरहेको भए पनि युक्रेनले युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेको हो । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले किभले मस्कोसँग कुनै सम्झौता स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । रुसले युक्रेनको बन्दरगाह सहर मरिउपोलमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि डोन्बासका दुई क्षेत्रमध्ये लुहान्स्कमा आक्रमण बढाएको हो ।
एजेन्सीहरू (जेनेभा) - कोरोना भाइरसको महामारीबाट छुटकारा पाउँदै गरेको विश्वलाई फेरि अर्को भाइरसले पिरोल्न थालेको छ । केही दिनयता विभिन्न देशमा ‘मंकीपक्स’ भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै विश्व समुदायमा चिन्ता बढेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार आइतबारसम्म १४ देशमा यसको संक्रमण देखिइसकेको जनाएको छ । ८० भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको र शंकास्पद ५० बारे अनुसन्धान भइरहेको संगठनले जनाएको छ ।
‘मंकीपक्स’ मध्ये तथा पश्चिम अफ्रिकामा सामान्य भए पनि अफ्रिकाबाहिर भने खासै देखिएको थिएन । डब्लूएचओले अन्य धेरैमा संक्रमण भएको हुन सक्ने जनाएको छ । यो भाइरसका मध्य अफ्रिकी र पश्चिम अफ्रिकी गरी दुई
भेरिएन्ट हुन्छन् ।
(काठमाडौं) - आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सीमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
(काठमाडौं) - सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तीन महिनाभित्र योजना निर्माण गरी क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कार्यक्रम सबै अलपत्र परेका छन् । आयातनिर्यातको खाडल बर्सेनि बढ्न थालेपछि रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने, अनुदान दिने, सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नेदेखि स्वदेशमै खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत दर्जनौं कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । बजेटमा यी सबै कार्यक्रम घोषणा भए पनि धेरैजसो अलपत्र छन् ।
कस्ता थिए कार्यक्रम ?
-व्यापार घाटा घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना बनाउने
-वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई
बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा
-सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकका पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री
स्वदेशमै उत्पादन गरिने
-स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना
-निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधि प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनबाट रुग्ण तथा बन्द उद्योग पुनरूत्थान
-नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरू गर्न पहुँचमार्ग निर्माण
र मेसिनरी जडान
-सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना
-विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन
-काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण
-कैलालीको हरैयनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा
-आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डार क्षमता बढाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण
-संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना
-पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना
-चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार
(काठमाडौं) - नयाँ सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुल्नेबारे फेरि अन्योल भएको छ । पुरानो लाइसेन्स वैशाख मसान्तभित्र वितरण सकेर जेठ पहिलो साताबाट नयाँ आवेदन खोल्ने दाबी गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागले समय फेरि जेठ दोस्रो साता पुर्‍याएको छ । तर विभागले भनेझैं फेरि तोकिएको समयमा लाइसेन्सका लागि आवेदन खुल्ने अवस्था छैन ।
लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न ललितपुरको एकान्तकुना र काठमाडौंको ठूलोभर्‍याङ कार्यालयको बढी छ । ‘प्रिन्ट भएर पनि पठाउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘बीचमा कुनै समस्या नआए तोकिएकै समयमा लाइसेन्सको काम सकिन्छ ।’ २०७८ पुस १३ मा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रिन्ट थाल्दासम्म ५ लाख ५० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सन् २०२४ नोभेम्बरसम्म समय तोकिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको दाबी विभागको छ । अब लाइसेन्सका लागि पहिले जस्तो लामो समय पर्खिनु नपर्ने विभागले दाबी गरिरहेको छ । तर पनि सुस्त काम गराइले सेवाग्राही मारमा छन् । क्यूआर कोडसहितको नयाँ लाइसेन्स एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षमा ५ पटकभन्दा कम गल्ती गरेको पाइए सेवाग्राहीले स्मार्ट
लाइसेन्स पाउनेछन् ।
(काठमाडौं) - फेरबदल भइरहने राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारले आआफ्नै एजेन्डा र प्राथमिकतामा मात्रै काम गर्ने चरित्रका कारण दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले राखेका छन् । सरकार फेरबदल भए पनि विकास र अर्थतन्त्रका एजेन्डामा एकत्व कायम हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ को लोकार्पण समारोह तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्श कार्यक्रमका वक्ताहरूले दीर्घकालीन विकास नीतिका लागि संरचनात्मक प्रणाली तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विकास र समृद्धिबारे हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न नसकेको समेत बताए । ‘अहिलेका राजनीतिक दल र नेतालाई चुनाव कसरी जित्ने भन्ने थाहा छ । तर चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने ज्ञान शून्य छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा जानेलाई प्रत्येक वर्ष के गर्छु, दायित्व के आइपर्छ, स्रोत के हुन्छ जस्ता विषयको पूर्वतयारी गरिएन भने अवस्था फेरि पनि अहिलेको जस्तै रहन्छ ।’
कांग्रेसले दीर्घकालीन विकास नीतिका रूपमा ‘प्रोजेक्ट गभर्नेन्स’ निर्माण गरिरहेको पनि थापाले बताए । विकास एजेन्डामा समान धारणा र प्राथमिकता निर्धारणमा एकत्व कायम गर्न प्रोजेक्ट गभर्नेन्स आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले काम गर्न सधैं सहज वातावरण खोज्ने नभई प्रतिकूलतामा पनि नतिजामुखी काम गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारमा बस्दै गर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्छ । केही गर्छु भने पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । स्रोतको सीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भनेर कर्मचारीलाई दोष दिनु बेकार हो । रिस्क लिने भनेको र राजनीतिज्ञहरूले हो । नियुक्त भएकै दिन मन्त्रीले सचिवहरूलाई बोलाएर मैले यी–यी काम गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि थापाले बताए । ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक भनेर बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘धागो तथा कपडा उद्योग, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, जडीबुटी, वन पैदावार, औषधि, हस्तकलाका सामग्रीलगायत क्षेत्रगत रूपमा पहिचान गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो ।’
अघिल्लो सरकारले दुई तिहाइको सहज अवसरका बाबजुद पनि सन्तोषप्रद काम गर्न नसक्नुमा विकासबारे धारणा नै बन्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘असाधारण अवसर पाएर पनि अघिल्लो सरकारले औसत काम गर्न सकेन । सुरुको वर्ष केही काम भए पनि दोस्रो वर्षबाट अस्थिरता सुरु भयो र तेस्रो वर्ष सबै क्षेत्रमा सरकारबाट धावा बोल्ने मात्रै काम भयो,’ वाग्लेले भने । पछिल्लो समय विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि मर्दै गएको उनको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य उषा झाले पनि विकासका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने र सोही नीतिअनुसार काम गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सरकार त छोटो अवधिका लागि होलान् । तर प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका लागि सोच्ने हो भने दिगो विकास हुन सक्दैन,’ झाले भनिन्, ‘विकास योजना पाँच वर्षका लागि मात्रै किन ? त्योभन्दा लामो समयका लागि पनि हेरिनुपर्‍यो ।’ बनेका राम्रा नीति पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, शिक्षा क्षेत्र बिग्रँदै जानु र विकास एजेन्डामा समावेशिताका कुरा नपर्नु अहिलेको समस्या रहेको झाको भनाइ छ । ‘देशलाई बर्बाद गर्न शिक्षालाई प्यारालाइज्ड गरिदिए हुन्छ । जुन बाटोमा हामी अहिले गइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशिताका कुरा पनि विकास एजेन्डाका रूपमा आउनुपर्छ । राम्रो नीति बनाएर कागजमा मात्रै
रह्यो, व्यवहारमा गएनौं ।’
(काठमाडौं) - नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिनेबारे सरकारले मनसाय बनाइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् । यसले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने र उपभोक्ताले समेत सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंक बेस्ट अपरेसन्स बैंक इन साउथ एसिया २०२१ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । विश्व बैंक समूहको सदस्य इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी)द्वारा आयोजित १०औं ग्लोबल ट्रेड अवार्डमा बैंकले उक्त उपाधि जितेको हो । उक्त अवार्ड शुक्रबार आईएफसीका तर्फबाट बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेललाई हस्तान्तरण गरे । आईएफसीको ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रमअन्तर्गत ५०० साझेदार बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक विभिन्न विधामा ४८ विजेता छानिएको हो । ग्राहकप्रतिको प्रतिबद्धतालाई यस उपाधिले थप मजबुत बनाउने र आगामी दिनमा अझ उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गरेको बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं (कास)– समग्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि धितोपत्र बोर्डले १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । यसमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा आरक्षण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको पुँजी वृद्धिसहित संरचनात्मक परिवर्तनलगायत छन् । नेपालमा धितोपत्रको प्राथमिक बजार सेवा देशव्यापी भए तापनि दोस्रो बजार कारोबार तथा राफसाफ प्रणाली हालसम्म पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन नसकेको बोर्डले स्विकारेको छ ।
यसकारण पुँजी बजार विकासका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक देखिएको बोर्डको तर्क छ । ‘धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन राफसाफ सुनिश्चितता कोषको सुदृढ व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउने,’ बोर्डले भनेको छ, ‘लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउन नयाँ धितोपत्र औजारहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ नयाँ स्टक एक्सचेञ्जबारे भने बोर्ड मौन बसेको छ ।
यी हुन् सुझाव
-नेप्से र सीडीएसको पुँजी वृद्धि, संरचनात्मक सुधार
-विदेशमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण
-साना–मझौला कम्पनीको कारोबार एसएमइज प्ल्याटफर्म
-पुँजीगत लाभकर घटाउने
-विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने
-धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना
-वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन
-ऋणपत्र बजारको विकास
-प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन
-प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन
-धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायका रुपमा परिभाषित
-एक अर्ब पुँजी वा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी सूचीकृत
काठमाडौं (कास)– चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २०७ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी २ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड ३० लाख बराबरका उद्योग दर्ता हुँदा २१ हजार ३ सय १९ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ८५ वटा बढी उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२२ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । १ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख बराबरका उद्योग दर्ता हुँदा ८ हजार २४ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको विभागको तथ्यांक छ । कोरोना महामारीको प्रकोप घट्दै गएका कारण उद्योग दर्ता बढ्दै गएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म विदेशी लगानीका ४९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी १७ अर्ब ३८ करोड ४० लाख बराबरका उद्योग दर्ता भएका हुन् ।
विदेशी लगानीका उद्योग गत वर्षको वैशाख मसान्तमा पनि ४९ वटा नै दर्ता भएका थिए । गत वर्ष ६ अर्ब ५० करोड २० लाख कुल पुँजी भएका उद्योग दर्ता भएका थिए । विदेशी/स्वदेशी लगानीका भने ९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका उद्योग दर्ता
भएका थिए ।
गत वर्षको तुलनामा विदेशी/स्वदेशी लगानीका संयुक्त उद्योग भने घटेका छन् । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्म कुल पुँजी ३ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका १४ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । गत वर्षको तुलनामा ५ वटा उद्योग कम दर्ता भएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ खर्ब ४६ अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल पुँजीको १ सय ३७ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्षभर विदेशी लगानीका ६ अर्ब ७८ करोड ७० लाख कुल पुँजीका ५२ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । संयुक्त लगानीका ३ अर्ब २४ करोड ४० लाख कुल पुँजी भएका १४ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए ।
काठमाडौं (कास)– नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको यो ७५ औं वर्ष हो । संयोगले नेपाली क्रिकेट टोली यसै साता विश्वकप लिग २ लिग खेल्न अमेरिका जाँदै छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द नेपालबाट कुनै पनि टिम गेम अमेरिका गएर आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न लागेको यो पहिलो हुन सक्ने जनाउँछन् ।
काठमाडौं (कास)– नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी रोहित चन्दले आइतबार इन्डोनेसियाली लिग वान क्लब पर्सिक कडिरीसँग अनुबन्ध गरेका छन् । पर्सिकले अनुबन्धको पुष्टि गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, ‘स्वागत छ, हिमालयन ह्वाइट टाइगर’ । यसअघि रोहित आबद्ध पर्सिजा जाकार्ताले रोहितले क्लब छाड्ने जनाउँदै बिदाइ भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो ।
सन् २०१७ मा उनी दोस्रो पटक पर्सिजासँग आबद्ध भए र त्यसयता १ सय १९ खेल खेल्दै १० गोल गरे । यसैक्रममा उनले एक लिग वान लिगसँगै तीन उपाधि जिते । सन् २०१८ मा उनी लिगकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए र यो उनको इन्डोनेसियाली फुटबलमा बिताएको सबैभन्दा उत्कृष्ट सिजन रहेको थियो ।
उनले सन् २०१३ देखि तीन वर्ष पर्सिजाबाट पहिलो पटक खेलेका थिए । रोहितको पहिलो इन्डोनेसियाली क्लब भने पीएसपीएस पेकेनबारु हो । उनले पर्सिजा छाड्ने क्रममा त्यस क्लबसँगको यात्रा उत्कृष्ट रहेको पनि बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई पर्सिजाले राम्रो खेलाडी मात्र नभएर असल मानिस बनाउन पनि मद्दत गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौं (कास)– पूर्ण शर्माको टोलीले आइतबार सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको प्रो एम उपाधि जितेको छ । पूर्णसहित एमेच्योर महेन्द्र फगामी, समीर आचार्य र कस्मिरा शाहको टोलीले गोकर्ण गल्फ क्लबमा १ सय ५३ अंक जोड्दै विजेता बनेका हुन् ।
व्यावसायिक गल्फर पूर्णले ४४ स्कोर गरे । त्यस्तै महेन्द्रले ३८, समीरले ३६ र कस्मिराले ३५ स्कोर गरे । सञ्जय लामाको टोली १ सय ४२ स्कोर गर्दै दोस्रो भयो । व्यावसायिक सञ्जयले ३८ स्कोर गरे भने उनीसँगैं रहेका एमेच्योरहरू विकास शाहले र बाबु शेर्पाले समान ३५ र प्रताप बोहराले ३४
स्कोर गरे ।
रवि खड्काको प्रो एम टोली तेस्रो भयो । रविले ३८, एमेच्योर आङ डेन्डी शेर्पा, चन्द्र लिम्बू र किशोर बस्नेतले समान ३४ स्कोर गर्दै कुल स्कोर १ सय ४० रन बनाएका थिए । सर्वाधिक ३५ स्कोर बनाएकाले कस्मिरा महिलातर्फको उत्कृष्ट खेलाडी बनिन् । दावा जे शेर्पाले लङ्गेस्ट ड्राइभ र आरती राज्यलक्ष्मी राणाले क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि पाए ।
स्टेबलफोर्ड ३/४ ह्यान्डिक्यापमा खेलिएको प्रो एममा २४ व्यावसायिक र १ सय १३ एमेच्योर खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए । सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रविकुमार रायाभरम, सूर्य नेपालका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यू पोद्दार, गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष
टासी घलेले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गरे ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२१–२२ को अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ सोमबारबाट सुरु हुँदै छ । त्यसमा ४३ व्यावसायिक र ११ एमेच्योर गल्फरले सहभागिता जनाउँदै छन् । सूर्य नेपाल गल्फ टुरको सबैभन्दा बढी १४ लाख ६१ हजार पुरस्कार राशि रहेको यो प्रतियोगिताको विजेताले २ लाख ५० हजार पाउनेछ । त्यस्तै उपविजेताले १ लाख ५५ हजार, तेस्रो हुनेले १ लाख ११ हजार, चौथो हुनेले ९५ हजार, पाँचौं हुनेले ८७ हजार पाउनेछन् । शीर्ष २१ को नाममा पुरस्कार रहनेछ ।
काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट स्कुलका आर्यन शाही र नेपाल प्रहरी स्कुलकी शुभश्री श्रेष्ठले प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगितामा आइतबार स्वर्ण जितेका छन् । यू–१२ सिंगल्सको ब्वाइजमा आर्यन र गर्ल्समा शुभश्री पहिलो भए ।
आर्यनले लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको ब्वाइज फाइनलमा न्यु होराइजनका सुविन थापालाई ११–५, ८–११, ११–७ र ११–९ को सेटमा पराजित गरे । आदर्श विद्यामन्दिर (एभीएम) का अतित गुरुङ र जेस्नु महर्जन तेस्रो भए । गर्ल्सको फाइनलमा शुभश्रीले एभीएमकी अर्सना महर्जनलाई ११–३, ११–२ र ११–५ को सोझो सेटमा हराइन् । प्रोक्सिमा इन्टरनेसनल एकेडेमीकी प्रज्ञा भेले र एलटीटीसीकी सुरम्या शाक्य तेस्रो बने ।
स्पिन इभेन्ट्स प्रा.लि. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताको क्याडेट ब्वाइज सिंगल्समा सुनसरीका सिद्धार्थ तामाङ पहिलो भए । उनले फाइनलमा एभीएमका एलेन महर्जनको चुनौती ११–४, ७–११, ११–७, ८–११ र ११–६ ले पन्छाए । भानुभक्त स्कुलका उज्ज्वल मानन्धर र दरबार हाईस्कुलका शंकर पहरीले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाए । उक्त स्पर्धाको गर्ल्स फाइनलमा एपीएफकी इभाना थापा मगरले प्रभात इङलिस स्कुलकी प्रदीपा सुवाललाई ११–८, ११–३ र ११–४ को सोझो सेटमा पाखा लगाइन् । एभीएम क्लबकी योङगी पौडेल र नेपाल आर्मीकी सुस्मिता
खड्का तेस्रो स्थानमा रहे । जुनियर ब्वाइजको सिंगल्समा एपीएफका रुविन महर्जन र मोरङका बोधित डीसीले फाइनल भिडन्त पक्का गरे । सो स्पर्धाको गर्ल्समा एपीएफकी वियंका राई र आर्मीकी दिया देउलाले फाइनल खेल्नेछन् । विभिन्न ८ स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा ६ स्पर्धाको फाइनल सम्पन्न भएको छ । बाँकी २ स्पर्धाको फाइनल अन्तिम दिन सोमबार हुनेछ ।
लन्डन (एएफपी)– म्यानचेस्टर सिटीले दुई गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर एस्टन भिल्लालाई ३–२ ले पराजित गर्दै आइतबार इंग्लिस प्रिमियर लिग जितेको छ । इतिहादमा भएको खेलमा प्राप्त नाटकीय जितपछि डिफेन्डिङ च्याम्पियन सिटीले लिग उपाधिको रक्षा गरेको हो । उसले प्रिमियर लिग जितेको भने यो छैटौंपल्ट हो । पेप ग्वार्डिओलाको सिटी लिभरपुलभन्दा एक अंकले अगाडि रहेर लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहन सफल रह्यो ।
लिभरपुलले अर्को खेलमा उल्भ्सलाई एनफिल्डमा ३–१ ले हरायो । भिल्लाले म्याटी क्यास र फिलिप कोउटिन्होको गोलले २–० को अग्रता लिएको थियो । तर सिटीका लागि इलकेयी गुन्डोगन र रोड्रीले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । गुन्डोगनले नै खेल सकिन नौ मिनेट अगाडि तेस्रो तथा निर्णायक गोल गरे । उनी बर्नोडो सिल्भाको वैकल्पिकका रूपमा मैदान छिरेका थिए र खेलमा निर्णायक छाप छोड्न सफल रहे । उनले ७६ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए ।
लिभरपुलको जितमा भने साडियो माने, मोहम्मद सलाह र एन्ड्र्यु रोबर्टसनले गोल गरे । उसले पनि एक गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट जित निकालेको हो । खेलको तेस्रो मिनेटमै उल्भ्सले पेड्रो नेटोको गोलबाट अप्रत्याशित अग्रता लिएको थियो । अन्तिम दिनको खेलपछि सिटीको ९३ अंक भएको छ भने लिभरपुल ९२ अंकमा रह्यो ।
चेल्सीले ७४ अंकमा तेस्रो स्थानमा रह्यो । उसले वाटफोर्डलाई संघर्षपूर्ण खेलमा २–१ ले पराजित गरेको हो । टोटनहम भने ७१ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट हुन सफल रह्यो । उसले नर्विचलाई ५–० ले हरायो । त्यसमा डेजान कुलुसेभेस्की र सन ह्वेङ–मिनले २–२ तथा कप्तान ह्यारी केनले एक गोल थपे । उसको छिमेकी उत्तरी लन्डन क्लब आर्सननल ६९ अंकमा पाँचौं स्थानमा रह्यो । आर्सनलले एभरटनलाई ५–१ ले हरायो । अब अर्को सिजन आर्सनलले युरोपा
लिग खेल्नेछ ।
म्यानचेस्टर युनाइटेड छैटौं स्थानमा रह्यो र उसले पनि युरोपा लिग खेल्नेछ । सातौं स्थानमा आएको वेस्ट ह्यामले भने युरोपा कन्फ्रेन्स लिग खेल्नेछ । म्यानचेस्टर र वेस्ट ह्याम दुवैका लागि अन्तिम दिनको खेल सुखद रहेन । म्यानचेस्टर क्रिस्टल प्यालेससँग १–० र वेस्ट
ह्याम ब्राइटनसँग ३–१ ले पराजित रहे ।
अर्कोतर्फ लिग तालिकाको १८ औं स्थानमा झरेर बर्नली भने रेलिगेसनमा परेको छ र उसले अर्को सिजन च्याम्पियनसिप लिग खेल्नेछ । बर्नली घरेलु मैदानमा न्युकासल युनाइटेडको हातबाट २–१ ले पराजित
रह्यो । अन्तिम दिनको खेल सुरु हुन अगाडि बर्नली लिग तालिकामा लिड्स युनाइटेडभन्दा गोल अन्तरले माथि थियो । तर लिड्सले अर्को खेलमा ब्रेन्टफोर्डलाई २–१ ले हरायो । यससँगै इंग्लिस फुटबलको माथिल्लो डिभिजनमा बर्नलीको छ वर्षको बसाइमा पूर्णविराम लागेको हो ।
न्युकासलले कलम विल्सनले पेनाल्टीबाट गरेको गोल मद्दतले अग्रता लिएको थियो । उनले नै न्युकासलका लागि दोस्रो गोल पनि थपे । बर्नलीका लागि म्याक्सवेल कोरनेटले एक गोल फर्काए पनि त्यो पर्याप्त रहेन । बर्नली ३५ अंकमा पुछारबाट तेस्रो स्थानमा रह्यो । उसको ठीक माथि लिड्स ३८ अंकमा रह्यो । प्रिमियर लिगबाट यस अगाडि नै वाटफोर्ड र नर्विच रेलिगेसनमा परिसकेका छन् । लिड्सका लागि ज्याक हारमिसनले दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयमा निर्णायक गोल गरे । अन्य खेलमा लेस्टरले
साउथह्याम्पटनलाई ४–१ ले हरायो ।
मिलान (एएफपी)– एसी मिलानले ससुलोलाई ३–१ ले पराजित गर्दै आइतबार इटालीको सिरी ‘ए’ उपाधि जितेको छ । उसको जितमा ओलिभर जिरुडले दुई तथा फ्रान्क केसीले एक गोल गरे । मिलानले सन् २०१०–२०११ मा अन्तिम पटक लिग जितेको थियो र त्यसको एक दशकभन्दा बढी समयपछि सफलता दोहोर्‍याउन सफल भएको छ ।
यो जितपछि मिलानको ८६ अंक भएको छ । अन्तिम दिनको खेलमा लिग जित्नका लागि उसलाई कम्तीमा हार टार्न आवश्यक थियो । उसको नजिकको प्रतिद्वन्द्वी तथा छिमेकी इन्टर मिलान ८४ अंकमा दोस्रो स्थानमा
रह्यो र उसले साम्पडोरियालाई सानसिरोमा भएको खेलमा समान ३–० ले नै पराजित गर्‍यो । तर डिफेन्डिङ च्याम्पियनका रूपमा इन्टरले उपाधिको रक्षा भने गर्न सकेन । साम्पडोरियाविरुद्ध उसका लागि ज्याकक्विन कोरेआले दुई तथा इभान पेरिसिचले एक गोल गरे । लिगको तेस्रो तथा चौथो स्थानमा रहेर नेपाली तथा युभेन्ट्सले अर्को सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिग खेल्नेछन् । यस्तै लाजियो र एएस रोमाले युरोपा लिग खेल्नेछन् ।